nay, Author at ananda
Home / Archives for nay
hoco. မှ လက်လီအရောင်းမိတ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်သစ်အဖြစ် ananda (အနန္တ) နှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်
18th အောက်တိုဘာ 2018 by nay
လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ရောင်းအားသည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ တိုးတက်လာခြင်း၏ ပြယုခ်အဖြစ်အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သည့် hoco. အမှတ်တံဆိပ်
ananda အတွက် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။
17th အောက်တိုဘာ 2018 by nay
ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဟောင်ကောင်၊ ကိုးရီးယားနဲ့ ဗီယက်နမ် အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ နီးပါးမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ Alan Sinfield ကိုခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင် ၆ ရက်က ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရသိရပါတယ်။ သူဟာ ဇွန်လ ၁ ရက်နေစပြီး Ananda ရဲ့ အမှု ဆောင်အရာရှိချုပ်ရာထူးကိုထမ်းဆောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Filed Under: အနန္တသတင်း
8th အောက်တိုဘာ 2018 by nay
ananda brand film – skater
အနန္တ မှ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့် Unlimited Data Service မှာ ကမ္ဘာအဆင့်မီ Digital လူနေမှုဘဝကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာနေထိုင်ရန်အတွက် ပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့အတူ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းရဲ့ ဝါသနာများကို ပြည့်စုံစွာ ဖန်တီးပေးရန်…
Filed Under: ဗီဒီယိုများ
ananda brand film – musician